Dubai City kuyinto Amazing Place! | | Ngothando kusuka e-UAE!
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at June 11, 2019
Dubai UMuzi Uyamangalisa Indawo!
Dubai City Inkampani njalo ngifuna ukudlulisa nokuvuselela amalungu ethu amasha abhalisiwe ngezindaba ezivela ku-Middle East. Ngakho-ke, sithumela ama-movie, izithombe kanye nolwazi mayelana Dubai City. Singa Dubai Abathandi futhi inhloso yethu ukukhuthaza i-United Arab Emirates.
Iqembu lethu lihlala libheke ukukhuthaza i-Emirates. Sihlala sinikeza izivakashi ithuba lokufunda nge UAE Indlela yokuphila, izichazi Guides 👳 kanye neDubai City Company ⭐⭐⭐⭐⭐ ithimba labablogi abafuna ukukunikeza amathuba amahle kakhulu ku-inthanethi nokwaziswa abafundi bethu bamazwe amane.
Ngisho nenye yezinkanyezi ezithandwayo ze-Bollywood Shah Rukh Khan kuthatha abalandeli bethu ngaye Indlela yokuphila yase Dubai. Futhi njengoba kunguye omema abanye eDubai. Ngaphezu kwalokho, AmaNdiya vele umthande emakhasini ethu ezokuxhumana.
Uhulumeni uye wakwazi ukuvakashela i-Mumbai futhi enze lo muntu omangalisayo anikeze izindawo azikhonzile kanye namasheya ngokuphila kwe-Dubai.
Ngakho, kuyokwenza wena be isivakashi sethu e-UAE? Kufanele uhlole i-Dubai imizwa ne-Bollywood Superstar. Futhi ngolwazi lwakho, umkhankaso nalesi sayithi sikahulumeni kugcinwa yi Dubai Corporation Wokukhangisa Nezohwebo. Ithemba othanda ama-movie !.
IDubai yethu emangalisayo isogwini olusempumalanga yePeninsula yase-Arabia. Futhi ingxenye enkulu yayo ikhona ekhoneni eseningizimu-nentshonalanga ye-Arabian Gulf. Idolobha laseDubai laziwa kakhulu amaNdiya futhi I-Pakistani abantu. Kanye nezivakashi zomhlaba wonke jikelele Europe kanye ne-US Dubai yokuba nomoya wayo wokufudumala owaziwayo kanye namagugu amasiko acebile ngezivakashi ezintsha ezivela emhlabeni wonke. Ngaphezu kwalokho, abantu bendawo abahlala e-7th Emirates bamukela zonke izivakashi ezintsha. Ngoba banomusa omkhulu endleleni yabo yokuba nezivakashi ezintsha eDubai City.
E-Dubai idolobha, sinezinsuku ezingu-356 zelanga. Ngakolunye uhlangothi, okuthakazelisayo izintaba zasolwandle lapho ungaba khona isikhathi sakho esihle kakhulu. Yiqiniso, i-Dubai enamabhishi amahle anehhotela elinethezeka kanye ne- ezinkulu ezinkulu zokuthenga ngezinto ezikhangayo zekhulu le-21st. Kukhona futhi okuhle kakhulu ibhizinisi umphakathi emhlabeni. Inhlokodolobha ye I-United Arab Emirates ithola izigidi zotshalomali ezintsha kanye namaphrojekthi njalo ngonyaka. Futhi unalokhu engqondweni, izivakashi zokungcebeleka nezamabhizinisi ezihamba ziye e-Emirates minyaka yonke zisuka emhlabeni wonke.
Kungani i-Dubai ingenye yemizi engcono emhlabeni wonke?
Kumele kukhunjulwe ukuthi lwemali yendawo iyi-dirham, hhayi i-dollar yase-US. Kodwa kuhle ngoba uma siqhathanisa i-AED 3.87 ne-1 dollar yase-US. Kubonakala sengathi umqondo ohlakaniphile ukuza futhi uchithe isikhathi esithile nesizwe esinokubekezela njengabantu baseDaul.
I-UAE iyizwe langaphandle futhi zonke izivakashi zingamukelekile ukuvakashela le ndawo futhi zibuke ukuthi i-Emirates emangalisayo iqhubeka kanjani ngobuchwepheshe. Kodwa-ke, inkolo yamaSulumane isendleleni yokuphila e Dubai. Ohlangothini olungalungile, izivakashi ezingakaze zibe Emirates kumele zamukele izinga elithile lokuzwela kwezamasiko nezenkolo phakathi nesikhathi samaholidi abo.
Imininingwane yedolobha lase-Dubai
E-United Arab Emirates, singathola umehluko omkhulu uma kuqhathaniswa neYurophu. Ngokwesibonelo, Abalawuli base Dubai ukuphatha le ndawo Kusukela ku-1833 nase-Al Maktoum umndeni wasebukhosini uye wabusa i-Dubai kusukela ngaleso sikhathi. I-Emirates ihlale iphinde ithuthukiswe. Futhi iNkosi yaseDaibra iyindoda ehlakaniphile futhi ihola indlela eqhubekayo yokuthuthukisa abaphathi abaholi abakhulu kunazo zonke e Dubai. Futhi kusukela ngaleso sikhathi i-Dubai isibe ibhizinisi lezokuvakasha endaweni yesigodi. I Umlando we-Dubai akulula lokho, ekuqaleni kwamaqembu e-800 wesizwe saseBani Yas, eholwa uMaktoum Family, ahlala emlonyeni wesiqhwa e-1833. Ngakho, isiqalo sasinzima kakhulu esizweni sama-Arabhu. Umfula wawungumkhumbi wemvelo kanye ne Dubai ngokushesha waba isikhungo sokudoba, ukuhweba nokuhweba olwandle.
Njengoba sonke siye sabona eTV emashumini ambalwa eminyaka edlule esifundeni saseGulf sabusiswa ngo-Emirates. Izindleko ezintsha nezakhamuzi ziye zabona ukukhula okungakahle kuyo yonke imikhakha yomnotho wase-Dubai. Uhulumeni ka-7th u-Emirate usebenza kanzima, futhi usebenzela njalo ukwenza ngcono izakhamizi zabo. I-United Arab Emirates isilungele ukuhweba kuze kube yilapho ikhula futhi iqalise imithethonqubo enamandla esiza amazwe asathuthuka. Futhi ukwakhiwa kwamabhizinisi amancane naphakathi kuyaqhubeka ngokweqile.
Lapho ucula nenkampani yethu futhi uzovula i-akhawunti yakho. Uzoba nethuba lokuxhumana nabanye abantu abavela e-Emirates naseQatar, I-Saudi Arabia futhi ngisho India. Ngakho-ke, sicela uqiniseke ukuthi uzoqala ukubhalisa nenkampani yethu. Bese uxhuma namanye amanethiwekhi ku-UAE.